Hoggaamiye isbeddel horseed
Buuh Publications, London, 2009
Waa buug u qaybsan laba waaxyood: Waaxda hore, irda-furka hoggaamintu, waxay ka kooban tahay saddex cutub. Cutubka 1aad, oo guud mar ku samaynaya hoggaamintu. Cutubka 2aad, wuxuu toosh ku ifinayaa hoggaamiyayaashii hore ee Soomaalida.Cutubka 3aad, wuxuu isna, dul mar kooban ku samaynayaa aragtiyaha hoggaaminta.
Waaxda labaad, tiirarka hoggaamintu, waxay soo bandhigaysaa moodeel iftiimin kara hoggaamiyaha wax ka beddeli kara xaaladda murugsan ee Soomaaliya. Moodeelkaasi wuxuu ka kooban yahay udub-dhexaad iyo afar tiir. Udub-dhexaadku waa qiyamka. Afarta tiirna waa horumarinta hiraalka, dad soo jiidashada, war-gaarsiinta iyo horseedidda isbeddel.
Akhriste - 2012-12-04 12:00:50
CUMAR - wadaniboy77@hotmail.com
ASC MAHAD ALLE AYAA LEH WAXAAN BOORINA KUNA BOGAADINAYAA BUUGAN UU QORAY MR.SAEED ALI SHIRE,REDSEA ONLINE WAXAAN IDINKA CODSANAYAA INAAD I SHEEGTAAN HALKA AAN KA HELI KARO BUUGAN
Akhriste - 2010-08-07 01:54:09
Abdilahi Abdi ( Cade ) - cade_111@hotmail.com
Runtii waa buug aad u qiimo iyo qaaya sareeya. waxa buugan hadyad ahaan iigu keenay Inan aanu ilmaabti nahay oo Bosao degan, tan iyo maalintaan akhriskiisa bilaabay waxaana isku arkay isbedel nafsaani ah, waayo waxaan jeclaa inaan mar walba akhriyo buugaagta siyaasada ka hadla, balse marnaba jaanis uma helin buug sidan oo kale u qoran oo waliba afsomali ah. Buugani waxu i fahan siiyey waa kuma siyaasi. runtii Siciid Cali Shire waa nin ay ka muuuqato aqoon dheeraad ahi waayo wuxuu si cilmiyaysan usoo gudbinayaa nuxurka buugga. thanks Mr. saed Ali Shire